Hal qof oo shaqaale ah ayaa dhintay, saddex ayaa cusbitaalka la dhigay shil warshada Nukliyeerka ee Spain
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Spain » Hal qof oo shaqaale ah ayaa dhintay, saddex ayaa cusbitaalka la dhigay shil warshada Nukliyeerka ee Spain
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Spain • Wakhtiga waarta • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Warshada tamarta nukliyeerka ee Asco oo ku taal Catalonia, Spain
Warshadda Ascó ayaa laga baadhay fallaadho shucaac ah oo ka soo baxay unugga 1-aad ee reactor bishii Noofambar 2007.
Toddoba unug dab-demis ah iyo afar baabuur oo degdeg ah oo caafimaad ayaa loola cararay warshadda tamarta nukliyeerka ee Asco Catalonia, Spain caawa abaaro 7 pm wakhtiga maxaliga ah kadib markii uu soo daatay kaarboon laba ogsaydh oo wayn ayaa laga soo sheegay xarunta.
Mid ka mid ah shaqaalihii ay saamaysay ayaa dhintay, saddexna si degdeg ah ayaa cusbitaalka loo dhigay ka dib markii ay maamulka maxalliga ahi uga shakiyeen kharash dheeraad ah oo ku yimid nidaamka ilaalinta dabka ee warshadda.
Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa sugay xarunta, waxaana ay daad gureeyeen qasaaraha ka dhashay.
Nidaamka dab-damiska ee warshadda "waxaa ku dhacay koronto CO2 taasoo saameysay afar qof," mas'uuliyiinta Catalan ayaa ku dhawaaqay.
Saddex ka mid ah shaqaalihii ka badbaaday daadku waxa ay hadda ku sugan yihiin cusbitaal ku yaal Mora d'Ebre oo u dhow.
Ma jiro wax shucaac ah oo ka soo baxay dhacdada, sida ay sheegeen labada warshad iyo maamulka deegaanka.
Warshada Asco ee ku taal Catalonia Waxa lagu baadhay fallaadho shucaac ah oo ka soo baxay reactor Unit 1 bishii Nofembar 2007, taasoo keentay in la eryo agaasimeheedii.